တူရကီတွင် machining center light machine ကို လည်ပတ်ရာတွင် အဘယ်အရာကို သတိထားသင့်သနည်း။
1. စက်ယန္တရားစင်တာ၏ optical စက်အား သက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများဖြင့် လည်ပတ်သင့်သည်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတိုင်ကီ၏ အရည်အဆင့်သည် သတ်မှတ်ထားသော ဆီအဆင့်လိုင်းထက် ကျော်လွန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပြီး လေအရင်းအမြစ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်၏ အလုပ်ဖိအားမှာ 0.6 ခန့်ဖြစ်သည်။ MPa;2. Cl...
၎င်းကိုဖွင့်ပြီးနောက် electro- spindle သည်အဘယ်ကြောင့်မလည်ပတ်သနည်း။ထိရောက်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်
Horizontal Lathe ၏လျှပ်စစ်ဗိုင်းလိပ်တံသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ အားအင်နည်းပါးသော၊ ဆူညံသံနည်းပါးပြီး မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှု၏ အားသာချက်များရှိသည်။စက်၏ servo spindle တွင် မြန်နှုန်းမြင့်ပြီး ပါဝါမြင့်မားသောကြောင့် စက်ကိရိယာ၏ ဒီဇိုင်းကို ရိုးရှင်းစေပြီး spindle positi ကို နားလည်ရလွယ်ကူစေသည်...
အရှေ့ဥရောပတွင် အကြီးစား အလျားလိုက် စက်သုံးစက်များကို ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်ရန်
admin မှ 22-06-18 ရက်နေ့တွင်
အလျားလိုက် ပေါင်းစက်၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာနှင့် သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ချောဆီ၊ ချိန်ညှိခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ အကာအကွယ်ပေးခြင်းစသည်ဖြင့် အော်ပရေတာ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။ စီးရီးတစ်ခု...
အရှေ့တောင်အာရှရှိ ရေပြင်ညီစက်ကို အသုံးမပြုမီ ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပါ။
အလျားလိုက် စက်သုံးစက်သည် လှည့်ပတ်သည့် ကိရိယာကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။စက်တွင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကောက်နုတ်ခြင်း၊ ကောက်နုတ်ခြင်း၊ ပုတ်ခြင်း၊ အသေများနှင့် ညှပ်ကိရိယာများကို သက်ဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။1. စက်တော်၏ ဆီပတ်လမ်းချိတ်ဆက်မှု ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးပါ၊ t...
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏စျေးကွက်တွင် ခြေကုပ်ယူရန် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်တစ်ချက်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတွင် အရည်အသွေးမြင့် လက်မှုပညာနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုတို့ကို ထုတ်လုပ်ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များက ၎င်းကို အလွန်ဂရုစိုက်သောကြောင့် အရေးကြီးပြီး လူသားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အကောင်းဆုံးရယူရန် အတွေ့အကြုံ လိုအပ်ပါသည်။ဖောက်သည်များကို အမှန်တကယ် ဂရုစိုက်ပါ။ယင်းမတိုင်မီက ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု...
ထိရောက်ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုပေးရန် ဖောက်သည်များအား အမြန်တုံ့ပြန်ခြင်း။
အမြဲလိုလို၊ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာကာ၊ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဆိုင်ရာ အားသာချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံများစုစည်းမှုနှင့်အတူ စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များကို နက်နက်နဲနဲနားလည်နိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများအား ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သောစနစ်ဖြေရှင်းချက်များဖြင့် ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များအား ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် အမြဲကြိုးစားနေပါသည်။ ...
စွမ်းအင်စျေးကွက်အသစ်တွင် 5-axis machining center ၏အားသာချက်များကိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
admin မှ 22-06-02 ရက်နေ့တွင်
5-axis linkage machining center ၊ 5-axis machining center သည် မြင့်မားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် မြင့်မားသော တိကျမှုရှိသော စက်ယန္တရားများ၊ တိကျမှုမြင့်မားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကလွှမ်းမိုးမှုရှိသော တိကျသေချာမှုရှိသော 5-axis linkage machining center ဖြစ်သည်။ပုဆိန် ၅ တောင့်၊
2022 မှာ စက်ချုပ်တဲ့အခါ လက်အိတ်ဝတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
ယနေ့ခေတ်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ရေးတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမား အများအပြားသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်အိတ်များ ဝတ်ဆင်ကြပြီး ထုတ်ကုန်၏ အစွန်းရှိ ဖလက်ရှ် သို့မဟုတ် သံပြားများကို ၎င်းတို့၏ လက်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ရန် လက်အိတ်များကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။စက်​လုပ်​တဲ့​သူ​တွေ​က​တော့ ဝင်ငွေ​အများကြီး​မ​ရ​ဘဲ ဆီ​အများကြီး​နဲ့ ကုန်​ကုန်​ကြ​တာ​တော့​မှန်​ပါ​တယ်။
အာရှတွင် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ငြီးငွေ့ဖွယ်စက်လုပ်ငန်း၏ ပုံမှန်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်အခြေအနေက အဘယ်နည်း။
စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတစ်ဆင့် လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ပါပြဿနာများကို ကြုံတွေ့ရကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိခဲ့ရသည်- ပထမအချက်မှာ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များသည် မြင့်မားလွန်းသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်ကြမ်းစျေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပြီး ၀ယ်လိုအား မြင့်တက်လာစေသော ပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုစရိတ်စကများ မြင့်တက်လာစေသည်...။
အာရှရှိ တူးဖော်စက်နှင့် ငြီးငွေ့ဖွယ်စက်လုပ်ငန်း၏ ပုံမှန်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်အခြေအနေကဘာလဲ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း စျေးကွက်ဝယ်လိုအားသည် ရိုးရာထုတ်ကုန်များမှ ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှု၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေသောလက္ခဏာများဖြင့် ထုတ်ကုန်များဆီသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။1. Drilling machine product စျေးကွက်အခြေအနေ လက်ရှိတွင် အသုံးပြုသူများ၏ လိုအပ်ချက်များသည် တူးဖော်စက်ထုတ်ကုန်များအတွက် မတူညီသော ပြ...
တိကျမှုမြင့်မားသော CNC စက်များသည် တိကျမှု၊ တောင့်တင်းမှုနှင့် မြန်နှုန်းမြင့် ရွေ့လျားမှုကို ရရှိနိုင်သည်။တိကျသေချာသော CNC စက်၏ဗိုင်းလိပ်တံသည် စွပ်အမျိုးအစား ယူနစ်ဗိုင်းလိပ်တံဖြစ်သည်။တိကျသော CNC စက်၏ spindle ပစ္စည်းသည် nitrided အလွိုင်းသံမဏိဖြစ်သည်။High-preci ၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော bearing assembly method...
အလျားလိုက် စက်သုံးစက်၏ တိကျမှန်ကန်မှု စံနှုန်းအကျဉ်းကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
admin မှ 22-05-19 ရက်နေ့တွင်
အလျားလိုက် စက်သုံးစက်သည် လှည့်ပတ်သည့် ကိရိယာကို အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။စက်တွင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ကောက်နုတ်ခြင်း၊ ကောက်နုတ်ခြင်း၊ ပုတ်ခြင်း၊ အသေများနှင့် ညှပ်ကိရိယာများကို သက်ဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။CNC horizontal lathe control engineering တွင် အသုံးများသော နည်းလမ်းမှာ ပထမဦးစွာ ...